Guddiyada goob shaqo iyo anshaxa oo tababar uga furmay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddiyada goob shaqo iyo anshaxa oo tababar uga furmay Muqdisho “SAWIRRO”
Guddiga Shalaaha Rayidka ee dowladda ayaa maanta tababar u furay guddiyada goob shaqo ee Wasaaradaha dowladda, kaasi oo ku saabsan sidii lagu bari lahaa waajibaadka ka saaran howlaha ay hayaan.
Guddiyada goob shaqo iyo anshaxa ee maanta tababarka loo furay ayaa waxa uu socon doono muddo labo cisho ah, waxaana inta uu socda guddiyada goob shaqo ay ku baran doonaan waajibaadka shaqo ee horyaalla iyo howlaha kale ee loo igmaday ee ah u adeegidda shaqaalaha rayidka ee dowladda.
Xoghayaha guddiga Qaranka ee shaqaalaha rayidka mudane Xasan Abshirow Maxamed ayaa sheegay in muhiimtahay la sameeyo tababaro ku saabsan waajibaadka gudiyada goob shaqo laga doonayo, maadaama ay mas’uuliyad weyn ka saarantahay ganaaxidda iyo abaalmarinta shaqaalaha rayidka ee dowladda.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka Cabdikariin Sheekh Xasan ayaa ka qeyb galayaasha tababarka kula dar daarmay inay la yimaadaan mas’uuliyad ku aadan waxa loo abuuray guddiyadan, isla markaana ay dhowraan xuquuqda shaqaalaha rayidka ah ee dowladda.
Guddoomiyaha Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka ee dowladda mudane Cali Maxamuud Ibraahim “Cali dheere” oo furay tababarka ayaa sheegay in sida ku cad qodobka 38aad ee tilmaamaya shaqooyinka iyo waajibaadka guddiyada goob shaqo, waxaana uu ku booriyay inay la yimaadaan howlkar iyo daacadnimo, si howlaha ay ugu adeegayaan shaqaalaha rayidka ay u noqdaan kuwa si cadaalad ah ku dhaca.
Madaxweyne Xasan Sheekh “Waxaan lee yahay ma jirto cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay”